अभिनेत्री ज्याकलीनको ७ करोड बढीको सम्पत्ति जफत ! « News24 : Premium News Channel
अभिनेत्री ज्याकलीनको ७ करोड बढीको सम्पत्ति जफत !
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री ज्याकलीन विरुद्ध ईडी (ED)ले ठूलो कारबाही गरेको छ । अभिनेत्रीको सात करोड भन्दा बढीको सम्पत्ति जफत गरिएको हो । ईडीले ज्याकलीनको सात करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको सम्पत्ति जफत गरेको हो, जसमा सम्पत्ति र सबै बहुमूल्य उपहारहरू समावेश छन् ।
उक्त सम्पत्ति र उपहार ज्याकलीनलाई सुकेश चन्द्रशेखरले दिएका थिए । यसअघि बलिउड लाइफले एक रिपोर्टमा सुकेश चन्द्रशेखरले ज्याकलीन फर्नान्डिजलाई हिराको औंठी दिएर प्रस्ताव गरेको बताएको थियो । इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टरेट (ईडी)ले ज्याकलीन फर्नान्डेजसँग सोधपुछ गरेपछि उनले सुकेश चन्द्रशेखरबाट करोडौं रुपैयाँको उपहार पाएको पत्ता लागेको थियो ।
जानकारी अनुसार ज्याकलीन र सुकेश त्यतिखेर रिलेशनशीपमा थिए । पछिल्लो रिपोर्टले खुलासा गरे अनुसार सुकेश चन्द्रशेखरले ज्याकलीन फर्नान्डिजलाई प्रस्ताव गरेका थिए र हिराको औंठी दिएका थिए । यो हीराको औंठीमा जे÷एस अक्षरहरू थिए ।
सुकेशसँगको रोमान्टिक फोटो भाइरल
ज्याकलीन फर्नान्डिज र सुकेश चन्द्रशेखरको रोमान्टिक तस्वीर सोशल मिडियामा भाइरल भएको थियो । यो तस्वीर आएपछि दुवैले एक–अर्कालाई डेट गरिरहेका अनुमान पनि गरिएको थियो । मिडिया रिपोर्टमा अभिनेत्री ज्याकलीनले ठगबाट करोडौंको उपहार पनि पाएका थिए । जसमा ९ लाखको घोडा र ५२ लाख मूल्यको पर्सियन कार समावेश थियो ।